ဟာသ ပဲ ။ | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Facebook » ဟာသ ပဲ ။
ဟာသ ပဲ ။
Posted by Foreign Resident on Mar 30, 2012 in Facebook | 26 comments
” ပါတီကြီး တစ်ခုမှ အခမဲ့ လိုက်ဝေသော အင်္ကျီများကို ယူ၍
လမ်းဘေးခွေးများကို ၀တ်ပေးနေသည်ဟု ကြားသိရပါသည်။
မည်သည့် အဖွဲ့ ၊ မည်သူက လုပ်သည်ဖြစ်စေ ၊
လည်းကောင်း လုပ်ရပ်အား ရှုတ်ချ ကန့်ကွက်ပါသည် “
ဖွတ် အင်္ကျီ ကို ခွေး သွား ဝတ် ပေး တော့ ၊
ခွေး သိက္ခာ ကျ တာ ပေါ့ ။
ကန့်ကွက် မယ် ဆိုလည်း ကန့် ကွက် စရာ ပဲ ၊
ကန့်ကွက် ပါ ။
” ပါးရိုက်တဲ့ ဂျပန်ကောင်လဲ တစ်ထောင်ပဲလားဗျာ “
ဟင် ဂျပန် ကိုလည်း တစ်ထောင်ပဲ ဆိုရင်
ဘယ် တရားပါ့မလဲ ။
ထက်ထက်မိုးဦး က မအေးသူစံ ကို
ဆံပင်ဆွဲပြီး အားရပါးရ ရိုက်တာလေ ။
ဟိုဂျပန်ကောင်က မြန်မာမ ကို
မထိတထိလေးပဲ စတိရိုက်သွားတဲ့ ဥစ္စာ ။
( မယုံရင် CCTV Record မှာ ပြန်ကြည့်ပါအုန်း )
( ဖြေးဖြေးလေးပဲ စတိ ရိုက်သွားတဲ့ ဥစ္စာ )
ထက်ထက်မိုးဦး က တစ်ထောင်ဆိုရင် ၊
အဲဒီ ဂျပန် ကို ငါးရာ လောက်ပဲ ဒါဏ်ငွေ ချသင့်တာပေါ့ ။
ဒါမှ တရားမျှတမှာလေ ။
လမ်းဘေးခွေးတွေဆိုတာ ဘယ်လိုလဲဟင် ခွေးကအကျီဝတ်သလား ခစ်ခစ်
မဟုတ်ဘူးအဘရဲ့။ မြန်မာမလေးကို ဒဏ်ငွေရိုက်ရမှာ။ စတိလေးချစ်စနိုးနဲ့ရိုက်တာကို တရားစွဲလို့ ဟိုဂျပန်ကို အသရေဖျက်မှု့နဲ့ ဒီဘက်ကပြန်လျှော်ရမှာ။
တစ်ထောင်တန် အုပ်လိုက်ကိုင်ပြီးတော့ ကြံ့ဖွတ်ကကောင်တွေကို ပါးလိုက်ရိုက်မယ်ဟေ့
ကျုပ်တို့နိုင်ငံ ရဲ့ တရားအူးပဒေလေ။
( ခွေးဖွတ်တက်တာတော့ ခုမှပဲသိရတော့တယ်ကွယ်— တော်တော်ကံဆိုးတဲ့ခွေးပါပဲ။)
နေရာတစ်ကာ သူရို့အဖွဲ့နာမည်လိုက်တပ်ပြီးမျက်နှာကောင်းယူကြော်ငြာလုပ်နေကျပါဗျာ၊ဘယ့်နှယ့် သည်
တစ်ခါဂုဏ်မယူပဲဒေါပွရတယ်လို့ ဟိ ဟိ။
ခွေးကလဲ အဲဒီအင်္ကျီကို အဲကြာကြီးဝတ်ထားမယ်မထင်ဘူးဗျ..တယောက်ယောက်တော့ပြန်ချွတ်ယူသွားလိမ့်မယ်ထင်တယ်
ဆိုတော့…ခွေးတောင်မ၀တ်တဲ့ အင်္ကျီလို့ထင်မိပါတယ်
ဟာသ ပဲ.။ ဒါပေမယ့်…..စိတ်မကောင်းစရာ ဟာသ..။
မြန်မာ နိုင်ံငံမှာနေရတာ….တမျိုးကြီးကို ခံစားနေရပြိ။
ဟုတ်ပဗျာ နေထိုင်ရတာ တမျိုးကြီးပဲ
အူတက်အောင်ရယ်ရမယ့် ဟာသတွေ ဖြစ်ဖြစ်နေတတ်တာမျိုးပါ။
ဒီကိစ္စကလည်း အတည်ပေါက်ကြီးနဲ့ ရယ်ရတဲ့ ပျက်လုံးတစ်ခုပါ။
ကြံ့ဖွံ့တို့လုပ်သမျှ သဲထဲရေသွန်ဆိုတာ အဲဒါ..
အမိန့်ချတဲ့တရားသူကြီး ဘယ်လိုမျက်နှာနဲ့ အမိန့်ဖတ်ကြားလဲဆိုတာ မြင်ချင်စမ်းပါဘိ။
မြန်မာပြည်တွင် လူများကို ခွေးများအုပ်ချုပ်နေ၏… အဲလိုပြောပါနဲ့ဗျာ…။
ထက်ထက်မိုးဦးက သူ့လက်နာသွားတာကို သနားလို့ အမှုမလုပ်ဆိုဘဲ…။
ဘဖော ဟာသ ပဲဆိုမှ ကျွန်တော်က စဉ်းစားကြစေလိုသည်ကြီး သွားသတိရပြီး ကြောင်ကောင်းကြောင်မဲ့ အတွေးတွေရောက်နေတယ် .
တစ်ထောင်ဘဲ ရိုက်လိုက်တယ် ..
တရားသူကြီး တစ်ယောက်အနေနဲ့ ငါ တစ်ထောင်ဘဲရိုက်လိုက်ရင် ဟိုးဟိုးကျော်သွားမယ်ဆိုတာ မသိလောက်အောင် တော့ မတုံးနိုင်ပါဘူး ။ စီရင်ချက် ချပေးရမဲ့သူက ဂျာနယ်သမား နဲ့ နိုင်ငံကျော် တစ်ချိန်က ပြည်သူ့ အချစ်တော် မင်းသမီး ။ face book ကနေ ကမ္ဘာ အထိ ပြန့်သွားမဲ့ ကိစ္စ။
ဒါပေမဲ့ တစ်ထောင် ဘဲ ရဲရဲဝံ့ဝံ့ ရိုက်လိုက်တယ် ။
အများ ပထမဆုံးတွေးတာ က ဒီတရားသူကြီး လာတ်စားထားပြီပေါ့။ ဟုတ်ချင်ဟုတ်မယ် ။ ဟုတ်ချင်မှလည်း ဟုတ်မယ်။ အများစုက စားထားလို့ပါလို့ ဘဲ မှတ်ချက်ချကြမှာဘဲ။ ဒါပေမဲ့လည်း သူတစ်ထောင်ဘဲရိုက်တယ် ။
သူ ဘာလို့ လုပ်ရဲလဲ ။ ရှင်းရှင်းလေးဘဲ ။ တရားဥပဒေ က ခွင့်ပြုထားလို့ လုပ်ရဲတယ် လို့ ကျွန်တော်တော့ တွေးတယ် ။
eleven သတင်းထဲမှာတော့ ပြစ်မှုဆိုင်ရာ ဥပဒေပုဒ်မ ၃၂၃သည် ပြစ်မှုထင်ရှား စီရင်ခြင်းခံရပါက ထောင်ဒဏ်တစ်နှစ်အထိ ပြစ်ဒဏ်ကျခံရနိုင်သော ပုဒ်မဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။ ဆိုတော့ အနဲဆုံးသည် ဘယ်လောက်လဲ။
ဥပဒေ အကြောင်း ကျွန်တော်မသိပါဘူး ။ ဥပဒေ ပညာရှင်တွေက သေသေချာချာ ၀င်ရောက်ရှင်းပြသင့်တယ် ။ ကိုရှမ်းတောင် ကြီး ရှင်းပေးပါဦး ။
တရားသူကြီး ဒေါ်ထွေးထွေးက တစ်နှစ်ထောင်ဒါဏ် ချလိုက်တယ် ဆိုပါတော့ ။ အများက ဟယ် တရားသူကြီး တော်တယ် ။ ကောင်းတယ် ။ ဒါမှ ထက်ထက်မိုးဦး မှတ်မှာလို့ ပြောသူပြော။ သနားပါတယ် ဆိုသူဆို နဲ့ မေ့သွားမှာဘဲ။ တရား ဥပဒေကို ဆန်းစစ်ကြမှာ မဟုတ်ဘူး ။
အခု တစ်ထောင် (သို့) တစ်လ ဆိုချမှတ်လိုက်တာ သည် ဒေါ်ထွေးထွေးက နေ မြန်မာနိုင်ငံ ဥပဒေ မှာ ခေတ်နဲ့ မလျော်တာတွေ ရှိနေသေးတယ်ဆိုတာကို သူ တစ်နည်းအားဖြင့် ဖော်ကောင်လုပ် လိုက်တာလားလို့ ကျွန်တော် အကောင်းဘက်ကနေ စဉ်းစားပေးနေပါသည်။
အဲ .. ထက်ထက်မိုးဦးဆီ က စားထားလို့ ဆိုရင်လည်း ပြည်သူတွေ အတွက် ကောင်းသွားတာပေါ့နော်..
တကယ်ကို မတူတဲ့ အတွေးအခေါ်ပါပဲ။
ထစ်ကနဲရှိ ၀ိုင်းသနား လိုက်ရတာနဲ့ …….
ထစ်ကနဲရှိ ၀ိုင်းဆဲ လိုက်ရတာနဲ့ ……..
ထစ်ကနဲရှိ ၀ိုင်းပြီး မုဒိတာပွား လိုက်ရတာနဲ့ ……..
ထစ်ကနဲရှိ ၀ိုင်းရိုက်ချင် လိုက်ရတာနဲ့ ………
ဇာတ်ထဲက လူပျက် တွေလိုပါပဲ ။
အဲ…ပြသာနာဖြစ်လာရင်တော့ ထစ်ကနဲရှိ တစ်ယောက်ထဲ ကိုယ်လွတ်ရုံးပြီး
ပြေးတတ်တဲ့ ဒီလူတွေ ဒီစရိုက်တွေ ဒီ အတွေးအခေါ်တွေ ကြားထဲမှာ
ကိုထူးဆန်း လို ဖြစ်တန်စွမ်း (Possibility) ကို စည်းစားတတ်တဲ့
လူတွေ များလာဖို့မျှော်လင့်ပါတယ် ။
Dear Brother, ကိုထူးဆန်းရေ။
You are real MG villager.
” MG ရွာသားတစ်ယောက် ဖြစ်နေလို့ ညံ့လို့မရ “.
အမှန်ကတော့ ၊ အဲဒီ တရားသူကြီးမ ဟာ ၊
အဲလောက် တွေးနိုင် ၊ အဲလောက် တော်လှန်ရဲတဲ့ ၊
သတ္တိ နှင့် အရည်အချင်း ရှိမယ်လို့ အဘ မထင်ပါကွယ် ။
ဒီလို နိုင်ငံကျော် အမှုတွေမှာ ၊ ဆုံးဖြတ်ချက်က ၊
အပေါ်က တိုက်ရိုက်လာပါတယ်ကွယ် ။
ဒါကြောင့်မို့သာ ၊ အဲဒီ တရားသူကြီးမ ၊
မတုန် မလှုပ်ပဲ ၊ ဒီအမိန့်ကို ဖတ်ပြရဲတာပါကွယ် ။
မြန်မာပြည်မှာ အချိန်မရွေး အထဲ ဆွဲသွင်းလို့ရတဲ့ သူတွေထဲမှာ
တရားသူကြီးတွေ ရှေ့ဆုံးနားမှာ ရှိပါတယ်ကွယ် ။
ဒါကြောင့် သူတို့ မလွန်ဆန်ရဲ ပါဘူးကွယ် ။
“ဥပဒေကိုလိုသလိုအသုံးချချင်ရင် ခပ်ရှုပ်ရှုပ်ရေးကြတဲ့”….. သူပြောတာတကယ်အမှန်ပါပဲစီဂျေကြီးရေ…..
တွက် တရားသူကြီးကထောင်ဒဏ်နှစ်လပေါ့ဗျာ ရမန်ကြီး(၁၄ရက်)နှစ်ပါတ်ကျော်လေးချပြီးလွတ်
ဘူးဗျ အဲလိုပြောလို့ဥပဒေမှာဒီလိုဆိုလို့ဥပဒေမှားလားဆိုတော့လည်းမမှားဘူးဗျ…. အကယ်၍
များ အကြောင်းကြောင်းကြောင့် အမှန်တရားဆိုတာမပေါ်ပေါက်ခဲ့ဘဲ ပြစ်မှုစီရင်ခြင်းမခံသင့်
တဲ့သူကို ပြစ်ဒဏ်တရပ်ချမှတ်မယ်ဆိုရင် နစ်နာမှုအကြီးအကျယ်ကိုဖြစ်သွားနိုင်တဲ့အတွက်
တရားသူကြီးများရဲ့ဆင်ခြင်တုံတရားကို သုံးပြီးဒီလိုလူတွေကိုကယ်တင်နိုင်ဖို့ဥပဒေက အာဏာ
“မြန်မာနိုင်ငံ ဥပဒေ မှာ ခေတ်နဲ့ မလျော်တာတွေ ရှိနေသေးတယ်ဆိုတာကို သူ တစ်နည်းအားဖြင့် ဖော်ကောင်လုပ် လိုက်တာလားလို့ ကျွန်တော် အကောင်းဘက်ကနေ စဉ်းစားပေးနေပါသည်။” ဒီစကားလေးမှာလည်း ဥပဒေကိုအမြဲup to date လုပ်ဖို့ဆိုတာလဲ
တကယ်ကိုပဲမလွယ်ကူပါဘူး……. ရခဲ့တယ်ဆိုရင်တောင် အဟောင်းအဟောင်းသောဥပဒေများ
အဲ့ဒီ့လိုဖျက်သိမ်းမရတဲ့ဒေသလေးကိုကွက်ပြီး customary law တစ်ခုအနေနဲ့ထားရှိရပါတယ်
ဥပမာဗျာ “မြန်မာနိုင်ငံမှာ မယားခိုးမှုအဖြစ်အနေနဲ့စွဲနေကြတဲ့ ကိုယ့်မယားကတစ်ပါးသော
ယောက်ျားနဲ့living togetherနေတဲ့ကိစ္စမျိုးဆိုရင် အရေးတယူပြုပြီးဖြေရှင်းရပေမယ့်
UKလိုနိုင်ငံမျိုးကျတော့ မယားခိုးမှုဆိုတာရှိကိုမရှိဘူးရယ်။….. ဥပဒေဆိုတဲ့ပညာရပ်ဟာလဲ
ဆင်ခြင်ဥာဏ်မဲ့သွားပြီဆိုရင်တော့ အသုံးချသူရဲ့အလွဲဟာ…. လူတစ်မျိုးလုံးကိုနှစ်ပေါင်းများ
စွာ …. အငြင်းပွားပြီး သတ်ကြဖြတ်ကြလုပ်ကြရတဲ့အထိကိုအကျိုးသက်ရောက်မှုသွားရှိပါတယ်
ငြိမ်အောင်မရမကနည်းနဲ့ ရေရှည်မကြည့်ဘဲ ဥပဒေတစ်ရပ်ပြဋ္ဌာန်းလိုက်တယ်
ဟာ ပြည်ထောင်စုမြန်မာနိုင်ငံထဲကခွဲထွက်ပြီးနိုင်ငံသစ်ထူထောင်ခွင့်ရှိတယ်လို့ပြဋ္ဌာန်းသတ်မှတ်လိုက်တဲ့အခါ နှစ်နှစ်ဆယ်လောက်တော့ တအားကြီးဆူညံပူညံဖြစ်တာကနေငြိမ်းသွားပေမယ့် အခုဒီဘက်ပိုင်းဆယ်စုနှစ်တွေလဲရောက်
တာများ ဟိုတစ်လောကကချင်ဒေသကြီးမှာကြည့်ရင်သိမှာပါ လက်နက်နဲ့ငြိမ်းချမ်းရေးလဲဖို့
ရောက်ပါရောလားဗျာ……. အဲဒီ့လိုဆိုလေပြန်တော့ ဥပဒေဆိုတာအမြဲအပ်တူဒိတ်လုပ်ဖို့
ရတဲ့သဘောရှိတာဆိုတော့အမြဲ ပြည့်စုံမှန်ကန်တဲ့ တိကျတဲ့ဥပဒေတစ်ခုထွက်ဖို့ဆိုတာ
ပိုပြီးတော့တောင်ကြာနိုင်ပါသေးတယ်……. မြန်မာနိုင်ငံဟာဆိုရင် အခုထိကို ဗြိတိသျှတွေရဲ့
ဥပဒေကိုရောနှောသုံးနေကြရသေးတယ်ဆိုတော့ စဉ်းစားသာကြည့်တော့ဗျာ ဥပဒေတစ်စောင်
ဒါ့ကြောင့်အခု ထက်ထက်မိုးဦးရဲ့အမှုမှာဆိုရင်လဲ ကျွန်တော့်ရဲ့အမြင်နဲ့သူကြီးရဲ့အမြင်ဟာ
ဒဏ်ငွေ.. ၁ထောင်လောက်ပဲချမယ်လို့ မှန်းထားတယ်..။
တရားရေးက.. အပြစ်ရှိတယ်လို့.. နိုင်ငံအဆင့်နာမယ်ကြိးဆယ်ရီဘရိတ်တီကို သတ်မှတ်ပေးလိုက်တာပါ…။
ဆယ်ရီဘရိတ်တီဘ၀မှာ.. အပြစ်ရှိသူဖြစ်သွားတာက.. ငွေသိန်းသန်းကုဋေမက.. နစ်နာတာပါ..။
နိုင်ငံတကာကို.. ဗီဇာလျှောက်.. အခွင့်အရေးတခုခုလျှောက်မယ်ဆိုရင်..
အခုဆိုရင် ထက်ထက်မိုးဦးရဲ့အမှုအကြောင်းဟာဖေ့ဘွတ်ပေါ်မှာ သူ့ပုံကာတွန်တွေနဲ့ပျံ့နေပြီ
သူ့အတွက်အရိပ်မဲက သူ့ကိုချစ်တဲ့ပြည်သူတွေထဲမှာဝင်သွားပြီး စီဂျေကြီးပြောသလိုပေါ့
ထက်ထက်မိုးဦးကိုထောင်တစ်နှစ်ချလိုက်ရင်တောင် သူ့ကိုချစ်တဲ့ပရိတ်သတ်က ဝိုင်းပြီးစိတ်
မကောင်းဖြစ်ကြ ပူညံပူညံတွေလုပ်ကြနဲ့ဖြစ်ဦးမယ် အခုဆိုရင်ထက်ထက်မိုးဦးအတွက်ချမှတ်
လိုက်တဲ့အမိန့်ဟာ သူ့ရဲ့လုပ်ရပ်ဟာ သူ့ကိုချစ်တဲ့ပရိတ်သတ်ကတောင်ရွံစရာတစ်ခုအဖြစ်မြင်လာကြပြီဆိုတော့
တရားသူကြီးဆုံးဖြတ်တာမျှတပါတယ် အကောင်းမြင်ဝါဒီဘက်ကကြည့်ရင်ပေါ့… တရားသူကြီး
ခင်တဲ့……မောင်ခ …. ရှမ်းပြည်သား(တောင်ပိုင်း)
အဘ တို့ သြဇီ မှာလည်း
မယားခိုးမှု ဆိုတာ မရှိပါဘူး ။
သူတို့က လူ့အခွင့်အရေး နှင့်
လူတဦးချင်းစီ ရဲ့ ကိုယ်ပိုင် လွတ်လပ်ခွင့် ကို
ကိုယ့် ကိုယ်ပိုင် ပစ္စည်း အစစ် နှင့် ကိုယ်လုပ်တာ ။
ဘယ်သူ နှင့် ဘယ်လောက် လုပ်လုပ် ( မီးပဲပွင့်ပွင့်ပေါ့နော် ) ၊
ဘယ်သူကမှ လာတားခွင့် မရှိဘူး ဆိုတဲ့ သဘော ပေါ့နော် ။
ကျေးဇူးပါ ကိုခ ရေ ..
ဘယ်တစ်ထောင်တန်မလဲ…. ၃၀၀၀ ပေးပြီး ဘုန်းကြီးတွေကို ပါးချခိုင်းခဲ့တာ ဘယ်သူတွေလဲ… တစ်ထောင်ကတော့ နည်းပါတယ်…
မရယ် ရလို့ ရယ်ရတယ်ဟေ့………..
ဖွတ်တွေ မိချောင်း ဖြစ်ကုန်ပြီဗျ
အောက်မှာ Lilo မူးရစ်ဆေးဝါးနဲ့မိ… မူးပြီးရမ်းတာကို.. ယူအက်စ်တရားရေးက ဘယ်လိုလုပ်ခဲ့သလည်း.. သိသာစေဖို့ကူးတင်ပါတယ်..
April 1, 2012, 12:43am
LOS ANGELES (Reuters) – A smiling Lindsay Lohan was released on Thursday from almost five years of formal probation, and told byaLos Angeles judge to grow up and stop clubbing.
“She has done everything that this court has asked of her,” Los Angeles Superior Court judge Stephanie Sautner said. “Probation terminates today. Now.”
Although the “Mean Girls” actress will remain on informal probation until 2014 fora2011 jewelry theft, she will not have to report regularly to court and will no longer be compelled to live in Los Angeles, as long as she stays out of trouble.
Sautner sent Lohan on her way with words of warning. “I know it is kind of hard when people are following you all over the place, but that is the life you chose. You need to live your life inamore mature way. Stop the nightclubbing and focus on your work.”
“I don’t expect to see you again,” Sautner added. “Goodbye and good luck.”
LiLo Freed After 4.5 Hours in Jail
That’s enough time to learnalesson, right?
(Newser) – Lindsay Lohan checked into jail at 8:48pm last night to serve her 30-day sentence … and promptly checked out again less than five hours later, around 1:30am,